အွန်လိုင်းပေါ်မှာငွေရှာနည်းလေးများ အပိုင်း(၁) | asnthanhan's Blog
Posted by asnthanhan under စီးပွားရေး, နည်းပညာ, ငွေကြေး
တော်တော်များ အွန်လိုင်းငွေရှာ နည်း တွေက Network commissions နည်းတွေနှင့် နက်ဝေါပ် အစုရှယ်ကော်မရှင် ပေးပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ တော်တော်များများနည်း တွေက အစပထမမှဘဲ Free အလကား ပေး ထားပြီးနောက်ပိုင်း တကယ်အရေးပါတဲ့နေရာရောက်ရင် ပိုက်ဆံပေးဝယ်မှ ၀င် ပြီးငွေရှာလို့ရတာကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်၊ ၀င်ငွေဘယ်လောက်ရတယ် ဆိုတဲ့ အဲဒီစာသားတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ… အများကြီးရှိပါတယ်….ဒီမှာ နမူနာ Link>>>howtomakemoney.sg
Are You Looking For A Source of Income,
Part Time , From Home or Online ?
Amzon,ebay,adsene(google)တွေက နာမည်ကြီးအွန်လိုင်းဈေးရောင်းတဲ့အစုံရောင်းဈေးဆိုင် တွေပါ၊ အဲဒီဆိုဒ်တွေမှာ ၀င်ပြီးဈေးရောင်းလို့ရတာကို သိတဲ့သူတွေနည်းပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အသိပေးရတာပါ၊
ကျွှန်တော်သိတလောက် Amazon ကတော့ အသင်းဝင်ပြီးသူရဲ့ Widget Code ခေါ်တဲ့ ကုဒ်ကို မိမိကြိုက်သလိုယူရင်ရပြီ မိမိရဲ့ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ဘလော့မှာထဲ့လိုက်ရုံဘဲ၊ ဘာမှာမခက်လို အသေးစိတ်ရေးမပေးတော့ပါဘူး၊ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ၊… ဒီမှာLink: >>>Amazon နမူနာ Link>>>ကျွှန်တော်ရဲ့ Amzzon Associate Store!
ebay ကတော့ Widget ကုဒ်တွေကို လစဉ်ကြေးပေးရပါတယ၊ ဈေးက Basic $15,95, Premium $49.95 and Anchor $299.95 တွေနှင့် မိမိရဲ့အရောင်းအိုင်ဒီတွေဖွင့်ပြီးမှ နောက်ပြီး မိမိလိုသလို ပြင်ဆင်ပြီးမှ မိမိရဲ့ဘလော့တွေထဲ့ မှရပါတယ်၊ …. ဒီမှာLink:>>>ebay
adsene-Google ကတော့ မိမိရဲ့အင်္ဂလိပ်ဘလော့ မှာဘဲ ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်၊
အခုဒီဝပ်ဆိုဒ်က ကျော်ငြာနည်းလမ်းနှင့် အွန်လိုင်းဝင်ငွေရှာနည်းလေးတခုကိုတွေ့မိလို့ရေးတင်လိုက် ပါတယ်၊ အခုဝပ်ဆိုဒ်က(Free) အလကားပေးထားတာတွေ့ရတယ်၊ အဲ! အားလုံးတော့ အလကားမရ ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူလဲ စီးပွားရှာနေတာကိုး! ပိုက်ဆံယူမှ ရတော့မှာပေါ့၊
ဒါက ကျော်ငြာနည်းလေးနှင့် ၀င်ငွေရှာနည်းလေး-Make Money! Part (1)
ဒါက Socical Affiliate Marking နည်းလေး-Make Money! Part (2)
ဒါက Game ကစားနည်းနှင့် ငွေရှာနည်းလေး-Make Money! Part (3)
စီးပွားရေး, နည်းပညာ, ငွေကြေး